Ibsa Addaa Bilisummaa Oromoo.Finfinnee Oromiyaa-WBO hiikkachiisuu miti mootummaan uummata iyyuu hidhachiisuu qaba. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsIbsa Addaa Bilisummaa Oromoo.Finfinnee Oromiyaa-WBO hiikkachiisuu miti mootummaan uummata iyyuu hidhachiisuu qaba.
Ibsa Addaa Bilisummaa Oromoo.
WBO hiikkachiisuu miti mootummaan uummata iyyuu hidhachiisuu qaba.
Seenaa impaayera Xophiyaa keeysatti Yakka Sukaneeysaan Ajjeechaa, duguuggaa Shanyii Waggaa 150 Oromoo irratti raawwatamaa jiruuf namni tokkolleen Seeraan gaafatamee hin beeku.Kanaaf Ibsa Addaa Bilisummaa Oromoo.
ABO: Loltootni keenya biyya keessa turan haaluma duraaniin karaa nagaan socho’aa akka jiran irraa dadebbine Ummata keenyaf ibsu barbanaa.
Rakkoo nageenyaa naannawa daangaa Benishaangul Gumuzii fi aanaalee Oromiyaa ollaa addaa addaa kessati uumamaa jiruuf dhaabni keenya ni balaaleffata.
Ummata Oromoo irratti ajjeechaa fi qe’ee irraa buqqisuun baruma baraan gaggeffamaa jira karaa Bahaan gaggeefamaa ture waan qabbanaa’e fakkannaan karaa Lixaanis Oromoo buqqisun jalqabame.
Haa tahu malee waliitti bu’insa Oromoofi saba bira jidduti ta’e jedhamee hasawama jiru kun walitti bu’insa saboota olla Oromoo gidduutti uumame osoo hin taane namootuma mootummaa waliin dhaabbachuun dimokiraasii guddisna jedhanii hiriiraniin kan gaggeefama jiruudha.
Addi bilisumma Oromoo rakkoo lammiilee teenya Kan Kamashiifi aanaalee Oromiyaa ollaarraa namoonni 50,000 buqqa’ani cina wan danda’un bira ni dhaabbata.
Hokkora Benishaangulitti dhalaten namoonni heddun du’an, heddunis miidhaman
Hoggantoonni godina Kamashii heddunis hidhattootaan ajjeefaman.Qaamooleen kunneen mootummaa irratti goolii kaasuun dadhabsiisuuf maallaqa ramadanii namootas bitanii akka hojjechiisaa jiran ifaa ta’e akka jiruu quba qabna.
Kun ammoo jijjirama siyaasaa biyya keessatti karaa hedduun dhufaa jiru gufachiisuuf shira hojjetama jiruu akka ta’e morummanis ni beeka jadhe amana.
Hidhattoota alaabaa ABO qabatantu ajjeechaa qondaaltota mootummaa godina Kamaashii irratti raawwate jechuun ibsa Komishiniin Naannoo Benishaangul Gumuz kenne ilaalchisees, Dhaabni keenya ABO duris kan qabsaa ture sirna uummata keenya miidhaa ture irratti malee nageenyi uummata keenyaa fi ollaa akka jeeqamu gochuuf miti.
Akkasumas dhaabni keenya Adda Bilisummaa Oromoo kabaja mirga sabaa fi sablammoota biyyittii keessaa jiran hundatti hundatti ni amana.
Motummaa fi Ummani keenyas wani hubachuu qaban Alabaa ABO qabatee kan hidhatee adeemuu hundi miseensa ABOti jechuun hin danda’amu. Sababni isaas maqaa dhaaba keenyaan bakkeewwan hedduutti namootni maallaqa walitti qabanii fi namoota doorsisuun saamicha gaggeesan waan jiraniif jecha.
Duris yakka hojjetamu hundaaf qaamonni garaagaraa ABOtti akka quba qabaa turan namni keenyafi Motummanis beeka. Kanaafu kan ammaa kunis waan haaraa miti. Maqaa dhaaba keenyaan faayidaa mataasaaniif kan hojjecha jirtantu jira kana ammoo irraa wan qabataman irraa ga’ameedha.
As irrati WBOn Loltootni Oromoo Oromiyaa kessaa bakkeewwan garaagaraatti argamu. Haa tahu malee human mootummaa waliinis tahe qaama kamiyyuu waliin walitti bu’aa hin jiran. WBOn biyya keessa jiran hundi haaluma duraaniin karaa nagaa socho’aa jiru. Humna mootummaa waliinis walitii bu’a hin jiru.
Addi Bilisummaa Oromoo duris shororkeessaa miti akkasumaa hidhannoo hiikachuun kaayyoo dhumaati jennee hin amannu. Mootummaan qaamoolii jijjirama amma dhufaa jiru kana gufachiisuuf socho’a jiruu osoo arguu caalisee usuun barbachisaa miti. ummmata keenya miidhuuf dhama’an waan jiraniif uummaticha mataasaa iyyuu hidhachiisuu qaba jennee amanna.
Kana jechun karaa nagaa qabsoofna malee akka duraanii waraanaan mootummaa buusna jechuu keenya miti. Hata’u ummani keenya bakka jiruu nageenya isaa egachu qaba.
Leenjii waraanaa gahaa tahes qabu. Kanaaf mootummaa waliin yommuu walii galtee xumuraa irra geenyu haala akkamiin hojiitti bobba’u kan jedhu murteessuun kan ifa taasifnu ta’a.Ammas nageenya uummataa eegsisuun gahee mootummaa qofa waan taheef loltootni keenya waraana uummata keenya irratti baname kanallee irraa ittisuu hin dandeenye. Yoo kana taasifnes dubbichi hammaachuu danda’a jennee wan amannef usnee.
ABO’n qabsoo hidhannoo dhaabuun karaa nagaa qabsaa’uuf erga biyya galees sagalee uummataa argachuun haala akkamiin qabsaa’uu akka danda’u irrattis hojecha jira
Via: Debisaa Wayyessa